မြေပုံမြို့မှ GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ | ' မြေပုံ ' လူငယ်များ
Homeကျနော်ရို့ အကြောင်းဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့နာရေးကူညီမူအသင်းလူငယ်တို့၏ ‘ အမြင်’မြေပုံမြို့ ၏ သမိုင်းဝင်ဘုရားများ
Homeမြေပုံမြို့မှ GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ	မြေပုံမြို့မှ GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ
November 21, 2013July 27, 2014 komyebon
MyebonNews, Other	မြေပုံမြို့မှ တန်းဖိုးနည်း GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံ မြို့ ရွာသစ်ကေ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူး သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း အများပြည်သူအတွက် GSM ( 1500 ) ကျပ်တန် ဆင်းကတ်များကို မဲစနစ် ဖြင့်ခွဲဝေဆောင် ရွက်ရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမူး၏ မိသားစု ၀င်များ ၊ ဆွေမျိုးများသာ ဖုန်းကတ်မဲပေါက်နေပီး ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှာ သံသယ တချို့ဖြင့် ဖုန်းကတ် မပါသော ဗလာမဲများသာ ရရှိခဲ့ပါသည် … စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စေ ရန် ရလာဒ်များကို တင်ပြလိုက်ပါသည်
ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မသိန်းဦး No. 250 454 835
အစ်ကိုတော်စပ်သူ ဦးကျော်ထင် No. 250 454 825
အစ်မသမီးတော်စပ်သူ ဒေါ်မမြသွယ် No. 250 454 827
အစ်မ သားတော်စပ်သူ ဦးမောင်ဝင်းလှိုင် No. 250 454 831
အစ်မသားတော်စပ်သူ ဦးတင်အေးကျော် No. 250 454 832
မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမူး ၏ ဆွေမျိုး ၊ မိသားစုထဲမှဖုန်းကတ် မဲပေါက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ SIM ကတ် ၁၅ ကတ်မှ ၅ ကတ်အား အုပ်ချုပ်ရေးမူး အဖွဲ့ ၀င်များအတွက် ၃ ကတ် ၊ဆယ်အိမ်မူး များအတွက် ၁ ကတ် နှင့် မိခင်နှင့်ခလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းအတွက် တစ်ကတ် ကို အစည်းအဝေး သဘောတူညီ ချက်အရ ဖယ်ချန်ထားခဲ့ပါသည်..
No . 250 454 834
No . 250 454 830 No . 250 454 828
No . 250 454 824 တို့ မှာ ကား SIM ကတ်မဲပေါက်သူများထံမှ ၉၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ပေးကာ ၀ယ်ယူထားသော ဖုန်းနံပါတ်များ ဖြစ်ပါသည်….. လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့် က အုပ်ချုပ်ရေးမူး ထံမှ ဖြေရှင်းချက် ထွက်လာသော်လည်း အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ထက် ၂၅၀၀ ကျပ်ထက် ပိုနေသော ငွေပေးဆောင် ရမူများရှိနေပါသည် ။
ထိုကြောင့် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၃ ပုံတစ်ပုံ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမူး မိသားစု သုံးပုံတစ်ပုံ နှင့် ရပ်ကွက် အတွင်းမှ ပြည်သူများ ၃ ပုံတစ်ပုံ ကံထူးကြသည်ဟု ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ သံသယဖြစ်လောက်အောင် ဆန်းပြားလွန်းသည့် ဖုန်းကတ်အကြောင်း ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်…။ အလားတူ တရုတ်တန်းရပ်ကွက် တွင် လည်း မကျေနပ်မူ များ ၊ လိမ်လည်မူများ ထွက်ပေါ်နေပီး အထောက်အထားဖြင့် မတင်ပြနိုင် သေးသဖြင့် ကျနော်တို့အဖွဲ့မှ ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါသည် …။ ပိုဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်မှာ GSM တန်ဖိုးနည်းဆင်းကတ်များ ပြည်သူ အတွက်တောင် မှ မလောက်မငှ နိုင်ရှာသော GSM ဆင်းကတ်များကို ဘင်္ဂလီများ က အာဏာပိုင်များဖြင့် ပူးပေါင်း ပီး ဈေးကြီးပေးဝယ်နေသည် ဟု ကျနော် တို့ သိမိ ၊ ကြားမိခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည် ဆင်းကတ်နှင့်ပတ်သတ်သော Post တစ်ခု ကို ဖတ်လိုပါက ကလစ်နှိပ်ပါ Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
← မြေပုံ မှ GSM SIMCARD သတင်းများ	မြေပုံမြို့ တွင် စာပေဟောပြောပွဲ လုပ်တော့မည် →
တင်ခဲ့ပီးသော ပိုစ့် များ	ညီမင်းခိုင် – လက်ခံမလား
မြေပုံမြို့နယ် ၊ ပေါက်တူးတောင်ရွာပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ဖြစ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်း
မျော်နိန်ပါချစ်သူ – ခိုင်မင်းဟိန်း
SARAH – Shell Of The Tortoise (2014)
မြေပုံမြို့ Jul 13 ,2014 ရေကြီးမှုမြင်ကွင်း
WordPress.com	Facebook တွင် Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Post များကို ဖတ်နိုင်ပါသည်	Facebook တွင် Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Post များကို ဖတ်နိုင်ပါသည်